အဆို​တော်​တစ်​​ယောက်​နဲ့ တွဲ​နေတယ်​ဆိုတဲ့ သတင်း ကို ပထမဦးဆုံး အကြိမ်​ ​တုန့် ပြန်​လိုက်​တဲ့ ယွန်း ယွန်း – Shwe Burma
အဆို​တော်​တစ်​​ယောက်​နဲ့ တွဲ​နေတယ်​ဆိုတဲ့ သတင်း ကို ပထမဦးဆုံး အကြိမ်​ ​တုန့် ပြန်​လိုက်​တဲ့ ယွန်း ယွန်း
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချိုမြမြ အပြုံးနုနုလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေး ယွန်းယွန်းကတော့ ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားလေးကို ဖမ်းစားထားနိုင်သူလေးပါ။ အရွယ်ရောက်လာလေ ပိုပိုလှလာလေ ဖြစ်တဲ့ ယွန်းယွန်းလေးကတော့ အခုဆိုရင် မင်းသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်နေရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ ယွန်းယွန်းက အဆိုတော်တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခုက လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါနော်။
အဆိုပါသတင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ယွန်းယွန်းက ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အနေနဲ့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ယွန်းယွန်းရဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယွန်းယွန်းကတော့ “Yoon ကျန်တာတွေခေါင်းထဲမထည့်ပါဘူးနော်.. ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မမုန်းပါဘူး..? ဒီချိန်လေးမှာ ပြောဆိုခံရမယ့်ကံပါလို့လို့ပဲတွေးပါတယ်.. နောက်တော့လည်းပြီးသွားမှာပါနော်။ စိတ်ပူပေးကြလို့လည်း ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် ??” ဆိုပြီး ပညာသားပါပါနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ယွန်းယွန်းရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမမှာ ချစ်သူ ရှိရှိ မရှိရှိ ချစ်မြဲ ချစ်နေကြမှာပါနော်။
ယွန်းယွန်းကတော့ လတ်တလောမှာ ဇာတ်ကားတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးဖြစ်နေပြီး တစ်ခြားသောအနုပညာအလုပ်တွေလည်း လုပ်ကိုင်ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ပီပြင်လွန်းတာကြောင့်လည်း ကလေးဘဝမှာကတည်းက အကယ်ဒမီဆုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ကောလဟလတွေကို ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ယွန်းယွန်းလေးကိုချစ်ရင် Share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Previous Article← ကမ္ဘာဂြိုဟ်နည်းတူ အင်္ဂါဂြိုဟ် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းက တွင်းချိုင့်ကြီးမှာ ရေခဲပြင်ကြီးကို တွေ့ရှိ
Next Articleနျူသဘောတူညီချက်မှ နုတ်ထွက်အပြီး အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြတ်သန်း →
Total views : 20703